Forum Komunitas Pertanian Indonesia Agroteknologi | MMXV
Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid Fambolena dia ny fambolena sy ny fiompiana ny biby, zava-maniry sy ny holatra ho an’ny sakafo, fibre, biofuel, fanafody zava-maniry sy ny vokatra hafa ampiasaina mba hanohana sy manatsara ny fiainana ny olombelona. Fambolena no manan-danja eo amin’ny fampandrosoana ny fiakaran’ny olona mipetrapetraka sivilizasiona, izay karazam-biby fiompy fambolena ny namorona ny sakafo surpluses izay kolokoloina ny fampandrosoana ny fandrosoana. Ny fianarana ny fambolena dia fantatra amin’ny anarana hoe fambolena siansa. Ny tantaran’ny fambolena daty indray an’arivony taona, ary ny fampandrosoana no noroahina ary voafaritra amin’ny alalan’ny indrindra ny toetrandro samy hafa, kolontsaina, ary ny teknolojia. Industrial fambolena mifototra amin’ny goavana monoculture Fambolena lasa ny manjaka fomba fiasan’ny fambolena.
Modern agronomy, fototra FIOMPIANA, agrochemicals toy ny fanafody famonoana bibikely sy ny zezika, ary ny teknolojia fivoaran’ny toe-draharaha ao toe-javatra maro mafy Nitombo vokatra avy amin’ny fambolena, nefa tamin’izany andro izany dia niteraka fahavoazana ara-tontolo iainana niely patrana sy ny ratsy ara-pahasalamana vokatry olombelona. Voafantina fiompiana sy ny fomba fanao eo amin’ny biby maoderina husbandry dia toy izany koa nitombo ny avoakany ny hena, fa efa nanangana ny ahiahy momba ny biby fifanampiana sy ny ara-pahasalamana vokatry ny antibiotika, mitombo hormonina, ary zavatra hafa matetika simika ampiasaina amin’ny indostria famokarana hena. Novaina zenetika zavamananaina dia singa iray tsy mitsaha-mitombo ny fambolena, na dia efa voarara tany amin’ny firenena maromaro. Pambolena ny famokarana sakafo sy ny rano dia miha-lasa eran-olana izay hanampy amin’ny adihevitra amin’ny maro ny mpifanandrina. Manan-danja simba ny tany sy ny rano ireo loharano, anisan’izany ny mihavitsy aquifers, efa nandinika tato anatin’ny folo taona, ary ny vokatry ny fiakaran’ny mari-panan’ny amin’ny fambolena sy ny fambolena amin’ny fiakaran’ny mari-panan’ny dia mbola tsy tena mazava. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid
Ny fambolena vokatra lehibe azo ankapobeny antokony ho sakafo, kofehy, solika, ary ny akora. Ahitana sakafo manokana voamadinika (grains), legioma, voankazo, menaka, hena sy ny zava-manitra. Anisan’ny kofehy landihazo, volon’ondry, hemp, landy sy rongony. Akora ahitana hazo sy volotsangana. Hafa ihany koa ireo fitaovana ilaina novokarin’ny zavamaniry, toy ny resins, loko, zava-mahadomelina, zava-manitra, biofuels sy ny firavany voapaika vokatra toy ny voninkazo sy ny zavamaniry garderie. Mihoatra ny iray ampahatelon’ny tontolo izao ny mpiasa miasa ao amin’ny fambolena, faharoa ihany sehatry ny fanompoana, na ny isan-jato ny mpamboly any amin’ny tany mandroso dia nihena be nandritra ny taonjato maro. Forum dan Komunitas Pertanian Indonesia – Agroteknologiwebid
Ny teny hoe fambolena dia tara Afovoany anglisy fampifanarahana ny teny agricultura, avy ager, an-tsaha, sy ny Cultura, fambolena na mitombo. Agriculture matetika manondro olombelona ny asa, na dia misy ihany koa ny sasany nandinika amin’ny karazana vitsika, vitsikazo taloha sy Ambrosia voangory. Mba manao fambolena dia midika hoe mampiasa ny harena voajanahary mba hamokarana entana izay foana ny fiainana, anisan’izany ny sakafo, fibre, ala vokatra, horticultural vokatra, sy ny asa mifandray amin’izany. Izany dia ahitana famaritana azo volena fambolena na agronomy, sy ny horticulture, teny ho an’ny rehetra ny fitomboan’ny zavamaniry, biby husbandry sy ny ala. Ny fanavahana dia atao indraindray eo ala sy ny fambolena, mifototra amin’ny ny teo aloha intsony ny fitantanana rotations, betsaka oharina mafy fanao fitantanana sy ny fampandrosoana ny maha-tena, fa tsy ny olona. Na izany aza, dia niaiky fa misy be dia be ny fahalalana sy ny famindrana hifanindry eo silviculture (ny fitantanana ny ala) sy ny fambolena. Ao amin’ny fambolena nentim-paharazana, ny roa mitambatra matetika na dia amin’ny kely landholdings, nitarika ny teny hoe agroforestry.
Previous PostNahwa Travel Malang JuandaNext PostVitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru